बागमती प्रदेश : संसदमा विपक्षको दलमा सत्तापक्षको विरोध – Chitwan Post
हेटौँडा । बागमती प्रदेशले ल्याएको बजेट र सरकार सञ्चालनको विषयलाई लिएर सदनदेखि संसदीय दलसम्म विरोध भएको छ ।
संसदमा सरकारको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्ष दलहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् भने नेकपाका बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले सरकारको चर्को विरोध गरेका छन् ।
तीन मन्त्रीले दिए जवाफ
चार दिनदेखि प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा बसिरहेको नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा सत्तारुढ सांसदहरुले सरकारका मन्त्रीहरुको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
बजेट विनियोजन मन्त्रीहरुको खल्तीबाट भएको भन्दै मन्त्रीहरुको सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै विरोध गरेका हुन् ।
सरकारले नेकपा प्रदेश कमिटीसँग छलफल नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुलाई प्रश्न सोधिएको एक सांसदले बताएका छन् । बुधबार भएको बैठकमा तीन जना मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका छन् ।
प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले जवाफ दिएका छन् । दुलाललाई मन्त्रालयबाट जाने बजेट सबै आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई मात्रै दिएको आरोप सांसदहरुले लगाएका थिए, जवाफमा मन्त्री दुलालले केही कमजोरी भएको भन्दै गल्ती स्वीकारको सहभागी सांसदले जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै, बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले पनि जवाफ दिएका छन् । भोली बिहान बाँकी मन्त्रीहरुले जवाफ दिने कार्यतालिका रहेको छ ।
यस्तै, आर्थिक मामिलामन्त्री आफूलाई मनपर्ने सांसदहरुको मात्रै बजेट थुपारेको आरोप लगाएका छन् । यस्तै, आर्थिक मामिलामन्त्रीले संसदहरुसँग मागेको कुनै पनि योजना नपारेको भन्दै बजेट संशोधन गरेरमात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बजेटको बहानामा सरकारका कामको समेत चर्को आलोचनासहित टिप्पणी भएको उनले बताए ।
संसदीय दलमा सत्तापक्षबाट आरोप खेपिरहेको सरकारले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्ष दलहरुले चर्को विरोध गरेका हुन् । विनियोजन विधेयकमाथि तीनदेखि लगातार चलिरहेको छलफल सरकारले ल्याएको बजेटको चर्को विरोध हुँदै आएको छ ।
बुधबार नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै बजेट हावादारी भएको बताईन् । यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. राजाराम कार्कीले बजेटमा समाजवादको गन्ध पनि नदेखिएको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसकै सांसद नरोत्तम वैध सांसदका लागि अर्बौंको बजेट दिने तर कोरोनाको लागि १९ करोडमात्रै ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता वाग्लेले बजेट दबाब र प्रभावमा आएको देखिएको बताएकी थिइन् । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णलाल भडेल किसानको पक्षमा विल्कुलै बजेट नआएको बताए ।
कांग्रेस सांसद बिजुला वर्मा राणाले प्रदेश सरकारले कोभिड १९ मा गरेको ५० करोड खर्चको हिसाब माग गर्दै केन्द्र सरकारको फेर समात्न छोड्नुपर्ने तर्क गरेकी थिइन् । बुधबारको संसदको बैठकमा भने सत्तापक्षका सांसदहरुले भने सरकारको बचाउ गरेका थिए ।
भरतपुरका ७९ बर्षीय बृद्धमा कोरोना
आज बुधबार ३८१ जनामा कोरोना पुष्टि